थाहा खबर: विश्‍वकप क्रिकेट : कसले वितरण गर्ला ट्रफी?
विश्‍वकप क्रिकेट : कसले वितरण गर्ला ट्रफी?
अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट परिषद् (आइसिसी) को आयोजनामा जारी एकदिवसीय क्रिकेट विश्वकपको सेमिफाइनल नजिकिएको छ। यसको अर्थ अब उपाधि जित्ने टिमको छिनोफानो हुन लामो समय छैन।
यो बीचमा योपटक उपाधि ट्रफी कसले हस्तान्तरण गर्ला भने चासो छाएको छ। किनकि आइसिसीले आफ्नो पुरानो परम्परालाई निरन्तरता देला वा नयाँ तरिकाले ट्रफी वितरण गर्ला भन्ने कौतूहलता सिर्जना भएको छ।
अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चारमाध्यामहरुले योपटक आइसिसी प्रमुखले उपाधि दिँदै आएको चलनमा परिवर्तन हुनसक्ने आँकलन गरेका छन्। योपटक पूर्व कुनै दिग्गज खेलाडीलाई ट्रफी वितरणमा निमन्त्रणा गर्ने संभावना रहेको जनाएका छन्।
परम्परालाई मान्ने हो भने योपटक १४ जुलाईमा हुने फाइनलमा वर्तमान अक्ष्यक्ष शशांक मनोहरले नै ट्रफी विजेता टिमलाई हस्तान्तरण गर्नेछन्। कतिपयले भने पूर्व दिग्गज खेलाडीहरू सचिन तेन्दुलकर या पूर्वविजेता टिमका कप्तान माइकल क्लार्कमध्ये कुनै एकले ट्रफी हस्तान्तरण गर्दा सकारात्मक सन्देश प्रवाह हुने जनाइएको छ।
त्यस्तै, कतिपयले ब्रिटिश शाही परिवारको कुनै सदस्यमार्फत ट्रफी वितरण गर्ने सम्‍भावना रहेको समेत बताइएको छ। आइसिसीले भने परम्परागत तरिकाभन्दा बाहिर जाँदा २०१५ मा विवाद भएको भन्दै योपटक अलमलमै रहेको छ। यद्यपि राजपरिवारलाईनै पहिलो प्राथमिक्तामा राखिने सम्‍भावना छ।